डाक्टर केसीकाे अान्दाेलनलार्इ सीके लालले किन भने गलत ?
काठमाण्डौ, पुस २८ । विश्लेषक तथा राजनीतिक टीप्पणीकार सीके लालले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलन कानूनी रुपमा गलत रहेको बताएका छन् ।
डाक्टर केसीकाे अान्दाेलनप्रति माैन रहेका लालले अाफ्नाे मौनता तोड्दै उक्त आन्दोलनबारे टिप्पणी गरेका हुन् । टीप्पणी गर्दै लालले भने, 'यदि संविधानलाई मान्ने हो भने कानूनी दृष्टिकोणबाट केसीको आन्दोलन गलत छ ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (अाइअाेएम)काे डिनमा शशी शर्मालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गराउन आदेश दिए लगत्तै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोविन्द केसी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाउँदै पराजुलीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर सोमबारदेखि अनसनमा उत्रिएका थिए ।
उक्त विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आइरहँदा सीके लालले समेत प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले भने, ‘नैतिक रुपमा आन्दोलन जति सुकै राम्रो भए पनि त्यसमा प्रश्न उठाउन मिल्छ ।’
लालले संविधानसभालाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने न्यायालयसँग किन यति अपेक्षा गरेको भन्ने समेत प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रश्न गर्दै भने, 'जहाँसम्म अदालतको कुरा छ अदालतले न्याय दिन्छ भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? यो त्यही अदालत होइन जसले आदालत मार्फत ‘कू’ गरेर सरकार मात्र होइन, विधायिका मात्र होइन नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गठन भएको संविधानसभालाई नै अवैधानिक घोषित गर्ने रु अनि त्यस्तो अदालतबाट योभन्दा बढी अपेक्षा किन ?'
विश्लेषक लालले गाेविन्द केसीकाे अान्दाेलनलार्इ कुहीगन्ध निस्किने प्वालसँग समेत तुलना गरे । उनी भन्छन्, 'नेपाली समाज जुन कुहिएको अवस्थामा छ त्यो कुहीगन्ध निस्कने विभिन्न प्वालहरुमध्येको एउटा प्वाल गोविन्द केसीको आन्दोलन हो । यसले अंग्रेजी नाटकको एउटा संवाद याद दिलाउँछ– ‘समथिङ इज रोटन ईन डेनमार्क’ भने जस्तै ‘समथिङ इज रोटन ईन नेपाल’ । भन्नुको अर्थ नेपालमा केही न केही कुहिएको छ र त्यसको गन्ध यो सानो प्वालबाट निस्किएको छ ।'
केसीकाे अान्दाेलनलार्इ भविष्यको सकारात्मक कुराको अर्थमा अर्थ्याउने हो भने उनकाे अान्दाेलनले एउटा बाटो देखाउने लालकाे दाबी छ ।
'यहाँ एउटा संविधान बनेको छ र त्यो गलत भएको छ । यो संविधान अन्तर्गतका नियुक्तिहरुमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । यो संविधान अन्तर्गतका सरकारहरुको निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । नयाँ किसिमको नेपालमा एउटा राजनीतिक चेतनाले भरिएको आन्दोलनको आवश्यकता छ, जसले नयाँ नेपालको निर्माण गर्नेछ', लालले भने, 'एउटा सपनालाई मृत्युवरण गराईयो तर नेपालीहरुले सपना देख्न छोड्नु हुँदैन ।'
समाज सामाजिक संघर्षहरुको घर्षणबाट गतिवान हुने भएकाेले डराउनुपर्ने अवस्था भने नरहेकाे लालले बताए । 'डराउनु पर्ने भनेको समाज कुहिन थाल्दा हो । तर समाजमा सामाजिक घर्षण भैरहेको छ भने हामी डराउनु पर्दैन', लालले भने ।
कुनै एक व्यक्तिको लहडमा कानून परिवर्तन नहुने भएकाेले कानुनी रुपमा हेर्दा केसी स्वत गलत साबित हुने लालकाे कथन छ । यद्यपि न्यायलयले सत्ताकाे प्रतिनिधित्व गर्ने र अहिलेकाे सत्ता नाफाखाेरहरुकाे गाेटी बनेकाे कारण नैतिकरुपमा हेर्ने हो भने चैँ गोविन्द केसी सहि ठहरिने लालले बताए ।
अान्दाेलनमा केसीकाे व्यक्तिगत स्वार्थ नजोडिएको कारण पनि डाक्टर केसीकाे अान्दाेलन नैतिक हिसाबमा सही भएकाे विश्लेषक लालकाे दाबी छ ।